Munamato Wemwana Wangu Ari Kurwara | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Kunamatira Mwana Wangu Ari Kurwara
Kunamatira Mwana Wangu Ari Kurwara
Iwe unonzwa sei kana mwana wako mudiki akarohwa ne kurwara? Iwe unonzwa kufara here kana mwana wako anokosha akatsikiswa nechirwere? Kunyanya, pazvinoratidzika kunge iye asiri kupindura kune ese kurapwa kwakave kwakagadziriswa nevarapi vekurapa. Ndiyo nguva yakanakisa yekutora iyo kunaIshe muminamato.
Vana inhaka yaMwari, Bhaibheri rinoti se museve uri mumaoko ehondo saka kune vana vadiki mumaoko aMwari. Rugwaro runoti vana vangu ndeye zviratidzo nezvishamiso kwete zvehurwere. Somubereki, kangani iwe unotaura shoko (Rugwaro) muhupenyu hwevana vako? iwe haufanire kumirira kudzamara vapererwa nehurwere usati wavasimudza aritari yemunamato.
Zvichakadaro, kana iwe uchigara uchinamatira ivo, kana kunonoka kuvasimudza aritari yemunamato ikozvino, kunyanya iye zvino ari pamubhedha wekurwara. Taura minamato inotevera yemwana wako anorwara.
Baba Vekudenga, zviri nemoyo inorema kuti ndotaura newe nhasi, mwana wawakandropafadza ari pasi nechirwere. Izwi rako rinotaura kuti ne mitsetse yako tapora. Ishe ndinokumbira kuti maoko ako ekuporesa aburitswe pamwana wangu. Ini ndinokumbira kuti nengoni dzako nhengo yese inoda kubatwa, ndinokumbira kuti maoko ako atange kuvabata izvozvi nekupa mwana wangu kupodzwa muzita raJesu.
Ishe Mwari wedenga, pazviri, zvakanyorwa kuti vana vangu vari vezviratidzo nezvishamiso. Ishe itai kuti kushamisika kwenyu kuitike maererano nehutano hwemwana wangu. Ndinokumbira kuti netsitsi dzako, upe mwana wangu hutano hwakasimba, ndiwe Mwari wenyama yose, hapana chinokona kuti iwe uite, ndinotenda zvakasimba pane zvauchaita, Ishe musandinyadzisa. Ishe Mwari, ndinokumbira kuti zita renyu risatukwe nekutukwa pamusoro pemwana wangu, vanoziva kuti ndinonamata Mwari mupenyu, kuti munhu wese azive kuti kuna Mwari muIsrael, kuti vazive kuti Mutsvene waIsraeri akunda. kuparadza joko rekurwara, kupa mwana wangu mudiki hutano hwakanaka muzita raJesu.
Iwe shoko rinoti unozoshandisa zvinhu zveupenzi zvepasi kunyadzisa vane njere, kupfuura kunzwisisika kwevashandi vekurapa, kupfuura kwavo kufananidza, kukonzera chishamiso chako kuti chiitike. Chishamiso chako ngachiitike, nekuti iwe ndiwe chete mushandi chaiye, murapi akakwana, ndinokumbira kuti iwe uite kuti chishamiso chako chiitike maererano nemwana wangu. Ishe ndimi murapi ane simba, ndinoda kuti musimuke muite izvo zvega zvamunogona imi. Zvinhu zvinokatyamadza nyanzvi dzese, kuti vazive kuti anogona kungova Mwari chete, ndinokumbira kuti iwe ugoita kuti chishamiso chako chiitike nezve hutano hwemwana wangu muzita raJesu.
Baba Vekudenga, ndinokumbira kuti imi mupe huchenjeri kumaDoctor anotarisira kurapwa kwemwana wangu. Bhaibheri rinoita kuti tinzwisise kuti zano ripi neripi rakanaka rinobva kwamuri Ishe, ndinokumbira kuti muvadzidzise zvinopfuura hunyanzvi hwavo, ndinokumbira kuti muvabatsire kupfuura zvese zvavanoshandisa, uye muchaunza mwana wangu zvakachengeteka tsoka dzake zvakare. Vanachiremba vepanyika vanokwanisa chete asi kuedza, iwe ndiwe chete unorapa zvakakwana, seMachiremba vachange vachiita zvese zvavanogona mukati memasimba avo, ndinokumbira kuti muvabatsire uye mhedzisiro yacho ibudirire muzita raJesu.
Kudenga Ishe, ndinotsvaga mweya wenyu mutsvene nesimba kuti vagofemera hupenyu mumwana wangu zvakare. Mapfupa ese, nyama, mutsinga uye nhengo yese yemuviri wake inogashira mweya wehupenyu zvakare. Ndiri kuda kunzwa izwi remwana wangu achitamba achindidaidza kuti Mummy / Baba, ndasuwa kufara kwake. Ishe fadzai muNgoni dzenyu dzisingaperi, femera hupenyu mumuviri wake unorwara zvakare. Moyo wangu unonetsekana, mufaro wangu waramba zvichitevera kuderera kwehutano hwemwana wangu, Ishe vanomudzorera patsoka dzake zvakare nezita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti hatingafi asi tichararama tichizivisa mabasa aIshe munyika yevapenyu, rega mwana wangu ararame kuti azivise mabasa ako.
Baba Tenzi, mufaro wemubereki wese kuona mwana wavo mudiki achikura. Ishe mubereki wese anowana mufaro wakakura mukutarisa vana vavo vadiki vachikura, asi ini mufaro wangu wave kuda kukanganiswa nehutano hwemwana wangu. Ishe, ndinoda kuti mwana wangu avezve neutano. Bhaibheri rinoti Akatumira mazwi Ake uye anoporesa zvirwere zvavo, Ishe ndinokumbira kuti mutaure izwi renyu rekuporesa mumwana wangu. Bhaibheri rakaitawo kuti ndinzwisise kuti pakutanga kwaive neshoko uye izwi raive kuna Mwari uye Mwari raive iro izwi. Neshoko, zvese zvakagadzirwa uye pasina icho, pakanga pasina chakaitwa. Ishe, ndinokumbira kuti muite izwi renyu resimba, izwi renyu rekuporesa muhupenyu hwemwana wangu uye muite kuti akure muuchenjeri uye musimba reizwi renyu.
Baba Tenzi, ndinokumbira kuti mundipe simba kuti ndisanete panguva ino yekuyedza. Ndinokumbira kuti umutsidzire moto wako mandiri kuti ndirege kuenda kunotsvaga rubatsiro pasina. Ini ndinotsvaga nyasha dzekugara ndichivimba uye netariro mushoko rako, kunyangwe zvikaita sekunge hapana chiri kushanda, kana zvichiita sekuti hondo iri kuda kurasika, ndinotsvaga iyo Nyasha kuti irambe yakasimba uye igare netariro mauri, kuti iwe ucha gara wakatsamwira zvishamiso zvako kunyangwe paminiti yekufa. Handidi kuti kurwara kwemwana wangu kundishandure kuva muChristu chekare, handidi kuve mutendi kamwechete, ndinokumbira kuti hutano hwemwana wangu husazokonzere kuti ndidzokere muzita raJesu.
Previous nyayaMunamato Kune Vaya Vakapindwa Muropa Nezvinodhaka
inoteveraMinamato Yezve Kuita Zvepabonde
Kunamata Kunongedzera Kurwisa Zvakaipa
Kunamata Points Kune Avo Vari PaMishinari
Minyengetero Yekurwisa Hondo Munyika